Bacela onke amadoda ahlushwayo akhulume
KUNXUSWA amanye amadoda ahlukunyezwayo aphumele obala, athole usizo emuva kokuba umculi wekwaito uMampintsha evulele icala intombi yakhe uBabes Wodumo
ZANELE MTHETHWA | March 8, 2019
IZINHLANGANO ezilwela amalungelo obulili zithi sekuyisikhathi sokuthi amadoda ahlukunyezwayo akhulume ngoba ayazibulala noma afele ngaphakathi. Lezi zinhlangano beziphawula ngodaba lomculi wekwaito uMandla Maphumulo odume ngelikaMampintsha, ovule icala lokushaywa yintombi yakhe uBabes Wodumo (Bongekile Maphumulo). UMampintsha uvule icala emuva kokusabalala kwe-video ezinkundleni zokuxhumana eshaya uBabes, athe ubephindisela ngoba ubemchukuluza futhi uhlala emshaya.
UMnuz Vusi Cebekhulu okhulumela iSonke Gender Justice, uthe kuyiqiniso ukuthi maningi amadoda ahlukunyezwayo kodwa ayesaba ukukhuluma. Uthe okuzoba yinkinga ngodaba lukaMampintsha ukuthi uvule icala ngoba nakhu sekuvele ivideo eshaya uBabes.
“Kuhle ngoba icala livuliwe, kumele kuphenywe kabanzi kube nobufakazi ngokuhlukunyezwa kwakhe. Naye kumele esekwe uma ngempela ebehlukunyezwa ngoba abukho ubulili okumele buhlukunyezwe,” echaza.
UCebekhulu uthe yize amadoda ebabikela ngokuhlukunyezwa, kusenzima ukuphumela obala nokuvula amacala ngenxa yenkolelo yokuthi indoda ayikhali. Uthe amadoda abonakala entekenteke uma eveza ukuthi ayahlukunyezwa.
“Siyathemba ukuthi ukuphumela obala kukaMampintsha kuzokhuthaza namanye amadoda ahlukunyezwayo. Sinxusa namanye amadoda ahlukunyezwayo ukuthi asebenzise izinhlaka ezikhona ukuthola usizo,” kusho yena.
UMnuz Javu Baloyi okhulumela iCommission for Gender Equality ephawula ngalolu daba kwelinye iphephandaba, uthe kumele izingane zabafana zikhuliswe ngenye indlela ukuze zikhule zingamadoda acabanga ngenye indlela.
OnguMsunguli wenhlangano yamadoda iMen’s Forum, uMnuz Mbuyiselo Botha, uveze ukuthi isikhathi esiningi amadoda ahlukumezeka ngokomoya. Uthe amanye ayazibulala ngoba esekhathele ukuhlukumezeka noma aphumele obala ngoba sekubone wonke umuntu.
“Usizo lukhona kodwa kwesinye isikhathi yiwona amadoda asabayo ukukhuluma. Amanye akhala ngokuthi asahlekwa uma eyobika emaphoyiseni ngokuhlukumezeka. Yize kunjalo kodwa siyawakhuthaza ukuthi akhulume. Kukhona ngisho abeluleki bezengqondo nezinhlangano ezeluleka imindeni ezingasiza,” kusho uBotha,
Muva nje, lushaqise abaningi udaba lukaMnuz James Mazibuko waseSoweto, oshiswe unina wezingane zakhe ngamafutha waboshwa. UBotha uncome isiteshi samaphoyisa eJabulani eSoweto ngokusukumela udaba lukaMazibuko.